Vegetable Folding Crates ဆိုသည်မှာဈေးဝယ်စင်တာတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်မုန့်များပါ ၀ င်သောခြင်းတောင်းဖြစ်သည်။ We Lonovae သည်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပလပ်စတစ်သေတ္တာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကမ်းလှမ်းထားသောသေတ္တာကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအရအဆင့်မြင့်ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဖောက်သည်များသည်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအရွယ်အစား၊ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဤသေတ္တာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် ခေါက်သေတ္တာ -01
အတိုင်းအတာ 600 * 400 * 110mm
ထုတ်ကုန်အမည် ခေါက် - 02 ခေါက်
အတိုင်းအတာ 600 * 400 * 170mm
ထုတ်ကုန်အမည် ခေါက် Crate-03
အတိုင်းအတာ 600 * 400 * 220mm
ထုတ်ကုန်အမည် ခေါက်သေတ္တာ -04
အတိုင်းအတာ 600 * 400 * 300mm
၁. မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရာမြောက်သောလက်ရာဖြစ်သည့်အတွက်ဝန်ကိုဝန်ပိစေသည်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး၌ဖိအားမရှိကြောင်းသေချာစေရန်အောက်ခြေတွင်အားကြီးသောလိုင်းများစွာရှိသည်။
၃ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမအရေပြားအပ်ရှိပါတယ်။
4. Long Life: PP အသစ်တစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ပစ္စည်းများကို SGS အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်မှတဆင့်စစ်ဆေးသည်။
လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများအတွက် Logo ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Lonovae တွင် Haitian ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္machinesာန်များစွာရှိသည်။ တရုတ် - ကိုရီးယားကျောက်တုံးကားများကိုအသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်စက်ရုံတွင် Haitian ဆေးထိုးဆေးထိုးစက်များစွာရှိပြီး Sino မှအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ -Korea ရေနံဓာတုပစ္စည်း။ ။ ကြီးမားသောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုန်သည်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခိုင်မာသောထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောစျေးဝယ်ခြင်းတောင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း၏အခြေခံကိုစွဲကိုင်ထားပါသည်။
ကျနော်တို့တင်းကျပ်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်များရှိသည်။